Tiknoolajiyaddii ugu dambeysay ee qalabka mootooyinka | Ragga Stylish
Ragga Stylish | | motor
Adduunyada mootooyinka si xawli leh ayey isu beddeleysa, kaliya ma ahan qaababka iyo cabirka, laakiin sidoo kale xagga qalabka mootooyinka, sida moto 125. Maanta, nabadgelyadu waa tixgelin aad u muhiim ah, iyo teknoolojiyadda ayaa qaan gaadhay sanadihii la soo dhaafay. Ma jeceshahay inaad wax badan ka ogaato tikniyoolajiyaddii ugu dambeysay? Sii wad akhriska!
1 Qalabka mooto bajaajka oo badan
2 Moodooyinka Mashiinka
5 Ku xaji guryaha anti-kickback
6 KTRC xakameynta jarista
7 Caawinta bilowga Hill
8 Farsamada LED-ka
Qalabka mooto bajaajka oo badan
Xitaa adduunka mootooyinka ayaa si xawli leh u socda, maaha in laga hadlo adduunka tiknoolajiyada. Waxaan markhaati ka nahay sida tartiib-tartiib ah ee isu-imaatinka labadan aag. Waxaan leenahay a xulashada ugu weyn ee qalabka GPS mootooyinka, oo leh adeegyo aad u fudud in la isticmaalo oo aad si buuxda uga faa'iideysan karto.
Laakiin sidoo kale waxaa jira is-dhexgalyo heer sare ah ku dhexjiro casrigaaga iyo caawiye caawiye (Siri ama Kaaliyaha Google), codsiyo badan oo socdaal ah oo ku xusuusinaya telemetry-ka mootadaada, iwm. Teknoolojiyadda ayaa nolosha fududeyneysa waxayna safarka ka dhigeysaa mid lagu raaxeysto, miyaadan u malayn?
Awooda jiilka cusub ee matoorrada awgood, maareynta mishiinka waxay noqotay mid muhiim ah in lagu waafajiyo xaaladaha kala duwan ee lagala kulmi karo intaad gaariga wadid, halkaasoo tayada wadada, heerkulka iyo cimilada ay saameyn weyn ku yeelan karaan qabashada la isticmaali karo. Kawasaki wuxuu hormood ka ahaa adoo adeegsanaya qaababka xakamaynta.
Baaskiiladaha isboortiga oo yar ayaa leh qalooc buuxa oo hooseeya waxay bixisaa 70% awoodda ugu badan iyo awood qeybsi horumarsan. Labadan qaab ayaa laga heli karaa Versys 1000 iyo Z1000SX, halka baaskiiladaha isboortiga ay leeyihiin saddex: waadax, dhexdhexaad, iyo hooseeya. Tani waxay ka dhigan tahay inaad beddeli karto muuqaalka baaskiilka adoo riixaya badhan.
Tan iyo markii ninkan reer Scotland John Boyd Dunlop uu rukhsad siiyay iyaga 1888, waxbadan ayaa isbadalay. 130-kii sano ee la soo dhaafay, noocyo kala duwan oo taayirro ah ayaa loo sameeyay qaybo mootooyin kala duwan ah. Oo soo kacay tabo cusub sida TPMS (nidaamka kormeerka cadaadiska taayirka) si loogu digo darawalada haddii cadaadiska taayirkoodu khaldan yahay.
Haddii taayirku uu meertado bareeg aad u daran awgeed, aaladda biraha bareega ah ayaa bilaabaysa. Marka cutubka kontoroolka mootadu ogaadaan dareemayaasha xawaaraha mootada inay siibtaan, waxay hoos u dhigeysaa cadaadiska kala-qabashada ka hor inta aysan dib u soo ceshan. Markay bilaawdo kala-joojinta degdegga ah, waxaad dareemi doontaa xoogaa garaacis ah kabaal biriq ama baaldeg. Iyada oo KIBS ah, ah nidaamka qaboojiyaha anti-quful caaqil oo si gaar ah loogu talagalay moodooyinka cayaaraha ee Kawasaki, oo ah summad shaki ku jirin inay tallaabo horay u qaaday.
Ku xidho cutubka kontoroolka mootada qaybta xakamaynta ABS si maamulkaagu u helo dhammaan faahfaahinta mootadu soo qaadanayso oo aad qaadi karto tallaabo gaar ah oo dheeraad ah.
Ku xaji guryaha anti-kickback
Waxay ka hortagtaa giraangirta gadaal inay xirnaato marka hoos loo dhigo, iska ilaalinta saamaynta iyo / ama shilalka. Xal dambe uma ahan xalka loogu talagalay mootooyinka sida gaarka ah u gaarka ah, sida ku dhacday horumaro kale oo xagga farsamada ee mootada, laakiin waxaa loo adeegsadaa qeybaha kala duwan.
KTRC xakameynta jarista
Xakamaynta jarista waa mid ka mid ah guulaha elektaroonigga ah ee ugu muhiimsan jiilalkii ugu dambeeyay ee mootooyinka. Hadda waxaad ku dardargelin kartaa isla tiknoolajiyadda ay adeegsadaan wadayaasha MotoGP. Kawasaki wuxuu ka bilaabmay KTRC, oo ku yimaada seddex heer oo awood ah waxaana loogu talagalay in lagu jaro ugu badnaan xoog leh ama difaac aad u sareeya oo leh qabasho hoose.
Xakamaynta xakamaynta waxaa laga heli karaa S-KTRC Sport Edition oo loogu talagalay Z1000SX, Versys 1000, GTR1400 iyo Goobaha Supersport. Waxay leedahay saddex goobood waxayna adeegsataa tikniyoolajiyadda 'DELTA' si ay u saadaaliso siibashada taayirka gadaal.
Caawinta bilowga Hill
Sidii hore loo soo sheegay, warshadaha laba-lugoodlaha leh waxay dhaxleen horumar farsamo oo ka billowday warshadaha baabuurta. Mid ka mid ah ayaa ah tan: kaalmada bilowga buurta. Cajiib, sax?
Nalalka hore ee baabuurta ayaa sidoo kale qayb ka ah ilaalinta firfircoon ee mootada maxaa yeelay waxay ka hortagi karaan shil. Waxaan ka guurnay laambadihii laydhka ama halogen-ka waxaan u wareegnay teknolojiyada LED-ka, taas oo waxay bixisaa aragti ballaaran oo ka wanaagsan. Intaas waxaa sii dheer, mootooyinka qaar waxay leeyihiin nalal iswada isku hagaajiya. Mustaqbalka, laydhka leysarka, oo labalaaba iftiinka iftiinka oo sii dheeraada, ayaa caam noqon doona.
Sideed u aragtaa horumarka kala duwan ee aan ku soo marnay adduunka mootada? Shaki la'aan, sanad walba waxay sharad ka sareeyaan, maxey mustaqbalka naga yaabi doonaan? Waan ogaan doonnaa!
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » nololeedka » motor » Teknolojiyadaha ugu dambeeyay ee qalabka mootada
Ragga maxay ka fikiraan?